သွေးတိုးခြင်းကို လျော့ပါးစေမယ့် နည်းလမ်း (၆) ချက် - YOYARLAY Digital Media and News
သင်သွေးတိုးခဏခဏစစ်ပါသလား ? သင့်သွေးတိုးက မြင့်လိုက်၊ ပုံမှန်ဖြစ်လိုက်၊ ကျလိုက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါသလား ? ဒါကသင့်မှာ သွေးတိုးအကြိုဖြစ်ဖူးတာကို ဆိုလိုတာပါ။ သွေးတိုးအကြိုနဲ့ သွေးတိုးနှစ်ခုလုံးက နှလုံးနဲ့ လေဖြတ်ခြင်းတို့အတွက် ဆိုးရွားတဲ့ရောဂါတွေပါ။ လူငယ်တွေမှာမဖြစ်ဘူးလို့မထင်ပါနဲ့။ ငယ်ရွယ်စဉ်တည်းက ဘဝကအလုပ်များပြီး စိတ်ဖိစီးမှုတွေများခြင်းက သွေးတိုးဖြစ်ခြင်းကို ပိုမြန်စေပါတယ်။
အစားအစာဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် အစားအစာအရွေမတတ်ရင် သင်ရောသင့်မိသားစုပါ ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်အခုကစပြီး ဆိုဒီယမ်နည်းနည်းနဲ့ ပိုတက်ဆီယမ် များများပါတဲ့ အစားအသောက်ပုံစကိုပြောင်းလဲရပါမယ်။
အကြောင်းက ပိုတက်ဆီယမ်က သွေးတိုးကျစေလို့ပါ။ ဒါ့အပြင် အသီးနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် တွေလည်းစားသင့်ပါတယ်။ အဆီများတဲ့ အသားတွေစားမယ့်အစား အဆီနည်းတဲ့ငါးတွေ ကြက်ဘဲတွေကိုစားသင့်ပါတယ်။ တခြားအဆီတွေကိုလည်း ရှောင်သင့်ပါတယ်။
အမေရိကန်တွေအတွက် အစားအသောက်လမ်းညွှန်ချက်မှာတော့ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ယောက်ဟာ တစ်နေ့ကိုဆား၂၃၀၀မိလီဂရမ်အောက် စားလို့ရပါတယ်။ အသက် ၅၁ အထက်လူတွေမှာတော့ တစ်ရက်ကို ဆား ၁၅၀၀ မီလီဂရမ်ဘဲစားလို့ရပါတယ်။ ဆားကိုဘယ်လိုလျှော့စားရမလဲ ? အောက်ပါနည်းတွေကိုသုံးပါ။
စားသောက်ကုန်တစ်ခူချင်းစီမှာ စာတန်းထိုးထားတဲ့ ဆားပါဝင်မှုကိုသေချာဖတ်ပါ။ ဒါမှ သင်ကတခြားစားသောက်ကုန်တွေနဲ့ ယှဉ်ကြည့်နိုင်ပြီး ဆိုဒီယမ်ပါဝင်မှုအနည်းဆုံးကိုရွေးနိုင်မှာပါ။ အသင့်စားအစားအစာတွေ မစားတော့ဘဲ အပြင်ထွက်စားပါ။ အဆင့်ဆင့်ပြလုပ်ထားတဲ့အစားအစာတွေ သိပ်မစားပါနဲ့ ဥပမာ – ကြက်အူချောင်း၊ ဝက်သားပြား ဒါမှမဟုတ်အေးခဲထားတဲ့ ထမင်းဘူး နဲ့ အသင့်စားခေါက်ဆွပြုတ်
နေ့စဉ် ချက်ပြုတ်ရာမှာလည်း ဆားလျှော့ပါ။
သွေးတိုးကျစေဖို့က ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားပေးခြင်းက နည်းလမ်းတစ်မျိုးပါဘဲ။ ဒါက စိတ်ဖိစီးမှုကင်းစေတဲ့အပြင် နှလုံးသွေးကြော၊ ကြွက်သား၊ အရိုးနဲ့ သွေးလည်ပတ်မှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ပြသနာတွေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေက တစ်နေ့ကိုကြံ့ခိုင်စေတဲ့လေးကျင့်ခန်းတွေကို ၁၅ မိနှစ်နှုန်းနဲ့ သာမန်အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုတော့ တစ်နေ့ မိနစ် ၃၀ နှုန်းလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
တကယ်လို့သင်ကအလုပ်များသူဆိုရင် မနက်ခင်းလမ်းဘျှောက်တာတို့ ပြေးတာတို့လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ကျန်းမာရေးကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ရက်နည်းနည်းစီတော့လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။
အပေါ်ကပြောသွားတဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားတာကလည်း ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေပါတယ်။ တကယ်လို့သင်ကအဝလွန်နေရင် တစ်နေ့ကို အဆီ ၂.၃ ကီလိုဂရမ်ကျစေတာက အဆင်ပြေပါတယ်။ သင့်တော်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်မှာ ရှိတာကသင့်ကိုသွေးတိုးနဲ့ တခြားရောဂါတွေဆီကကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အရက်ကသွေးတိုးစေတဲ့အကြောင်းအရင်းဖြစ်တဲ့အပြင် အသည်းထိခိုက်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်းတစ်ခုပါ။ အမျိုးသမီးအရွယ်တိုင်းက တစ်နေ့ကို အရက်တစ်ခွက်သောက်နိုင်ပြီး အသက် ၆၅ နှစ်အောက်အမျိုးသားတွေကတော့ တစ်ရက် နှစ်ခွက်သောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရက်အစား အယ်လ်ကိုဟောပါဝင်မှုနည်းတဲ့ ဝိုင်ကိုသောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ် တန်ဆေးလွန်ဘေးပါ။
ဒီနေ့ခေတ်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ အဖြစ်များကြပါတယ်။ လူတိုင်းလိလိုက အလုပ်၊ ဖျားနာမှု၊ မိသားစုနဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေကြောင့် စိတ်ဖိစီးဖူးကြပါတယ်။ ဒီလိုစိတ်ဖိစီးတာကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့အတွက် သင့်နေထိုင်မှုပုံစံကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါ။
ဥပမာ – လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်ခြင်း၊ အိပ်ရေးဝဝအိပ်ခြင်း၊ အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ ဒေါသထိန်းချုပ်ခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အတတ်နိုင်ဆုံးစိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ကြပါ။
သွေးတိုးစစ်ဖို့ဆေးရုံသွားစရာမလိုပါဘူး။ အိမ်မှာ သွေးတိုးတိုင်းကိရိယာဝယ်တိုင်းနိုင်ပါတယ်။ တစ်ရက်နှစ်ကြိမ်တိုင်းသင့်ပါတယ်။ မနက်နဲ့ညပါ။ မှတ်ထားရမှာက မတိုင်းခင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ကော်ဖီသောက်ခြင်း၊ မျက်စဉ်းဆေးခတ်ခြင်း စတာတွေမလုပ်ထားရပါဘူး။ ဒါတွေက ရလဒ်ကိုသက်ရောက်စေလို့ပါ။ တကယ်လို့ဒါကိုသင်မှန်မှန်လုပ်ရင် အလေ့အကျင့်ရလာမှာပါ။
Previous Previous post: ထိုင်းဘက်ကနေ အလုပ်သမားတစ်သိန်းကျော် ပြန်လာမယ် တရားဝင်ရော၊ တရားမဝင်ရော လက်ခံသွားမယ်လို့ဆို
Next Next post: အခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လာမယ့် Vivo V19 ကို မြန်မာပြည်မှာ စတင်မိတ်ဆက်တော့မယ်